यौन सन्तुष्टि पूरा नहुँदा मानसिक रोग, उपाय यस्तो छ – News Of Global
उपेन्द्र खड्का बिहिबार, फाल्गुण ०६, २०७७
म २६ वर्षकी विवाहिता हुँ । हाम्रो ४ वर्षको छोरा छ । हामी दुवैलाई यौन चाहना हुनु स्वाभाविकै हो । जब छोरो निदाउँछ तब हाम्रो यौन क्रियाकलाप सुरु हुन्छ । तर, श्रीमान छिट्टै उत्तेजनामा आउनुहुन्छ र यौन चाहना मेटाउन खोज्नुहुन्छ तर म भने इमोसनमा आइसकेकै हुन्न । त्यसैले म यस मामिलामा त्यति धेरै सन्तुष्ट हुन सकेकी छैन बरु तनाव बढेर आउँँछ । किन त्यस्तो भएको हो डाक्टर साब रु
महिला कतिबेला यौन चाहना गर्छन् रु र पुरुष किन छिट्टै उत्कर्षमा पुगी स्खलित हुन्छन् ?
‘प्रायः महिला आफ्नो यौन साथी हिंश्रक भएको मन पराउँदैनन । दुवैले यौन शिक्षाको ज्ञान अवश्य लिनुपर्छ । पति कुनै पनि भावना साटासाट नगरी यौन प्रक्रियामा आउँदा पत्नीले मेरो काम भनेको उसको यौन चाहना मेटाउने मात्रै हो र रु भन्ने सोचाइ आउन सक्छ । त्यसैगरी पतिमा पनि पत्नीलाई मप्रति यसको रुचि नै छैन भनी शंका उत्पन्न हुन्छ । यसरी यौन साथीबीच तादात्म्यता नमिल्दा नैराश्यता आउने, हीन भावना पैदा भई ‘एक्स्ट्रा म्यरिटियल अफियर’ हुने सम्म सम्भावना हुन्छ । यौन कुण्ठाकै कारण कतिपय त लागू पदार्थ सेवन गर्ने, कुलतमा लागी उपचारका लागि अस्पतालसम्म आउँछन् । छोरामान्छे शरीरसँग आत्मीयता राख्न खोज्छन् भने महिला भावनासँग आत्मीय सम्बन्ध राख्न खोज्छन्।
‘रिजोलुसन’ चरण सेक्सको अन्तिम अर्थात चौथो चरण हो । यो चरणमा सेक्सको आनन्द लिई पुरानै अवस्थामा फर्किनु हो । डा। अधिकारीका अनुसार धेरै जसो पुरुषको ‘अर्गाजुम’ छिटो आउँछ तर महिलाको ‘एराउजल’ तथा ‘एक्साइटमेन्ट’ पछि मात्र आउँदै गरेको हुन्छ । त्यस कारण सेक्सको आनन्दको तादात्म्यता नमिल्दा तनाव, शंकाउपशंका, पारिवारिक कलह आदि समस्या उत्पन्न हुन्छन्।
काठमाडौं जस्तो सहरी क्षेत्रमा बसाइको सीमित स्थान ९कोठा० हुने, गोप्यता कम हुने, दुवैले काम गर्नुपर्ने बाध्यता तथा थकाइका कारण सेक्सको आनन्द लिन फुर्सद नहुने कारणले पनि अरूसँग प्रेममा भुल्ने, परिवारमा बच्चाबच्ची हुने तथा पतीपत्नीबीच प्रेमका भावना साटासाट गर्न नपाउनाले र यौन इच्छा नै प्रभावित हुने भएकाले पतीपत्नीका बीचमा कलह पैदा हुने तथा मानसिकरूपमा तनाव उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । यौन समस्याका कारण मानसिक तनाव हुनेमा प्रायः २० देखि ३५ वर्षका जोडी नै प्रभावित भएको पाइन्छ । आधुनिक जीवनशैली तथा आफ्नो जीवनसाथी वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने बाध्यताका कारण पनि यौन जीवनमा समस्या आई मानसिक रोगीको संख्या बढिरहेको छ।
मानसिक रोग के हो रु यो कसरी लाग्छ र यसका समाधानका उपाय के छन् ?
मानवअधिकार दिवशको उपलक्ष्यमा बुटवलमा रक्तदान सम्पन्न